Manampia fanamarihana amin'ny horonan-tsarinao Youtube | Martech Zone
Talata, May 21, 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ny ankamaroan'ny orinasa dia mampakatra horonan-tsary Youtube fa aza manararaotra manatsara ny lahatsarin'izy ireo na manampy anototra. Azonao atao ny manisy soratra, rohy ary toerana mafana amin'ny horonan-tsaryo, miaraka amin'ny fanamarihana. Ny Annotations dia ahafahanao manampy fampahalalana, fifandraisana ary firotsahana. Ho an'ny orinasa, midika izany fa afaka mametaka antso-to-hetsika mivantana ianao amin'ny horonan-tsary - manampy rohy miverina amin'ny demo, fisintomana na fisoratana anarana.
Tsy hoe miseho amin'ny Youtube fotsiny ireo fanamarihana fa aseho amin'ny mpilalao tafiditra ao ihany koa. Farafaharatsiny farafaharatsiny, tokony manampy anototra hangataka ny mpijery hisoratra anarana amin'ny fantsonao Youtube ianao!
Misy karazany dimy ny anotasy azo isafidianana:
Bubble kabary mamorona fehezan-teny pop-up miaraka amina lahatsoratra.
Spotlight - asongadino ireo faritra ao anaty horonan-tsary; rehefa mihetsika ny totozy amin'ireo mpampiasa ireo ny mpampiasa dia hiseho ny lahatsoratra ampidirinao.
Fanamarihana - mamorona boaty pop-up misy lahatsoratra.
Title - mamorona takelaka an-tsoratra mba hitondrana ny lohateny hoe horonan-tsary.
Label - mamorona marika hiantsoana sy hanomezana anarana manokana ny horonan-tsarinao.
Ny naoty, Bubble amin'ny kabary ary ny spotlight, dia azo ampifandraisina amin'ny "atiny" toy ny horonan-tsary hafa, horonan-tsary mitovy, pejy fantsona, lisitra playlist, valin'ny fikarohana. Toy izany koa, izy ireo dia azo ampifandraisina amin'ny "antso ho amin'ny hetsika" toy ny famandrihana, famoronana hafatra ary fampidirana valiny amin'ny horonan-tsary. Zahao ny boaty "Link" eo ambanin'ny "Start" sy "End". Azonao atao ny misafidy raha tianao hampifandray amin'ny horonan-tsary hafa, ny fantsonao, na amin'ny rohy ivelany ny fanamarihana.
Ho an'ny sasany torohevitra mandroso amin'ny fampiasana ny fanamarihana Youtube - tsidiho ny pejin'izy ireo momba ny lohahevitra. Raha te hampiasa Youtube tokoa, zahao ny Bokin'ny Mpamorona nivoatra izy ireo!
Tags: fanamarihana youtubelabel YouTubefanamarihana rohy youtubenaoty youtubebubble kabary amin'ny youtubespotlight youtubetitre youtube
Ny fivoaran'ny Magento
May 22, 2013 amin'ny 4: 30 AM
heveriko fa tena ilaina io. Misaotra anao!